ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအထောက်အပံ့စီးပွားရေး | မြျှောလငျ့ခ Medical Center မှ
ဆေးဘက်ထောက်ခံမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာမခွဲခြားဘဲစီးပွားရေးအခွအေနနေမကောင်း၏, ဒီဆေးဝါးမှအကြိုးခံစားနိုင်ဖျားနာ haejuneunde ဖြစ်ပါသည်. မိသားစုကိုပြံ့နှံ့တစ်ခုလုံးကိုမိသားစုထဲမှာတစ်ဦးကလူတစ်ဦးအကျပ်အတည်းအတွက်လဲကြလိမ့်မည်. အထူးသဖြင့်ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံမိသားစုများ, နိုင်ငံခြားအလုပ်သမား, ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ, etc ဆေးပညာမျက်စိကန်းသောအစက်အပြောက်၏ရှေ့တော်မှောက်ကနျြးမာရေးအာမခံအပါအဝင်ကျန်းမာရေးစနစ် access ကို, ရဖို့မနိုင်ဆေးရုံပြံ့နှံ့ကုသမှု၏ကုန်ကျစရိတ်မှာမလာပါဘူး. ထိုအိပ်မက်မျှော်လင့် Medical Center မှတွင်ကစီးပွားရေးအခက်အခဲများနှင့်အတူယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံမိသားစုများအတွက်လုံလောက်သောဆေးဝါးကုသမှုန်ဆောင်မှုမခံမယူပါဘူး, နိုင်ငံခြားအလုပ်သမား, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုစီမံကိန်းကိုတိုးချဲ့, ထိုကဲ့သို့သောဒုက္ခသည်များအဖြစ်အားနည်းချက်အုပ်စုများအတွက်ဂရုစိုက်.
ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများကို(စာရင်းသွင်းနေထိုင်, မှတ်ပုံမတင်ဘဲ နေထိုင်ခွင့်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။)
အခြားသော ဆေးပညာနည်းပါးသော အတန်းများ(နိုင်ငံသားများဆိုးလ်မြို့ကြက်ခြေနီဆေးရုံကြီးဆေးဘက်ဆိုင်ရာလူမှုလုပ်ငန်းခွင်ရေးအဖွဲ့ပထမဦးစွာတိုင်ပင်ဆွေးနွေး၏ဖြစ်ရပ်အတွက်)
ယခုနှစ်များအတွက်ဆင်းရဲမွဲတေမှုလစဉ်ဝင်ငွေ, အိမ်ခြံမြေရည်ညွှန်းအဆင့် 200% လျော့နည်းသောအချက်(ဒါဟာကုသမှု၏အရေးတကြီးပေါ် မူတည်. ထောက်ပံ့ထားနိုင်ပါတယ်)
အချို့သောရမှတ် သို့မဟုတ် ပိုမြင့်သူများသည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကုန်ကျစရိတ် ပံ့ပိုးမှုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း အကဲဖြတ်ဇယားကိုဖြည့်သည့်အခါ
ဆေးဝါးကုသမှု တောင်းခံလွှာ သို့မဟုတ် ဆရာဝန်လက်မှတ်(အခြားအဖွဲ့အစည်းများအတွက် Yonsei University က၏တန်ခိုးရရှိနိုင်မှုနှင့်ဤနေရာတွင်ဆွေးနွေးတင်ပြ)